Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Waxbarasho / Waxbarashooyinka kala duwan
Waxbarasho dhamaystir ah
Haddii aad haysato waxbarasho xirfad oo aad ka heshay dal kale oo aan ahayn Iswiidhan, ama ku soo shaqaysay xirfad gudaha dal kale, waxaad u baahan kartaa inaad dhigato waxbarasho dhamaystir ah. Waa waxbarasho aad ku baranayso waxa looga baahanyahay si aad ugu shaqayso xirfadan gudaha Iswiidhan.
Waxbarashooyinka dhamaystirka ah waxaa laga helaa jaamicadaha iyo kuliyadaha. Waxaa jira tusaale ahaan waxbarashooyinka:
aqoonta nidaamka kombiyuutarada
Waxbarashooyinkan dhererkoodu waa inta u dhaxaysa 1–2 sano. Waxaad kaalmo waxbarasho ka heli kartaa Guddiga ammuuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda, CSN, xilliga wakhtiga aad dhigato waxbarashadan.
Akhri dheeraad ku saabsan waxbarashooyinka dhamaystirka ah oo ku qoran bogga intarnatka ee Studera.nu. Warbixintan waxaa lagu helayaa Iswiidhish iyo Ingiriisi.